Ny adidin'ny mpino nahatsiaro famonjena | FJKM Amboniloha
Ny adidin’ny mpino nahatsiaro famonjena
Mofon’aina 17 Septambra 2014
I Tantara 16, 23 – 27
Amin’ ny alalan’ny hira fiderana no nanambaran’ny Isiraely ny famonjen’Andriamanitra azy. Ny Fiangonana nandray famonjena koa :
Mitaona ny hafa hanompo an’Andriamanitra :
Ny isanandininy ao amin’ity fihirana ity, dia mitaona ny olona hiankohoka sy hankalaza an’Andriamanitra. Izany no atao hoe manompo Azy. Ny teny rehetra ampiasaina eto dia fitaomana sy fiantsoana ny hafa handray anjara amin’ny fiderana avokoa : Mihirà, lazao isan-andro, ambarao,… Koa raha tena tsapantsika ny famonjena natolotry ny Tompo tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy dia andeha mba hitaona ny hafa isika hanompo Azy koa.
Maneho ny fahambonian’Andriamanitra :
Manomboka eo amin’ny and.25…dia asehon’ny Israely amin’ny alalan’ny hira, fa tsy misy izay tahaka an’Andriamanitra. Manao fampitahana an’ Andriamanitra amin’ny andriamanitry ny firenena manodidina azy izy, ka tsapany fa Andriamanitra tompon’ny hery ary tsy azo vazivaziana Ilay Andriamaniny. Izany hoe : ambony indrindra Andriamanitra. Manerana ny tany rehetra ny Voninahiny ka mendrika hoderaina indrindra. Na i Jesoa aza dia tsy efa naneho ny fahambonian’ny Ray : « Midera Anao Aho Raiko Tompon’ny lanitra sy ny tany… » Haintsika ve ny maneho ny fahambonian’Ilay Tompontsika, indrindra amin’izao fisian’ny fivavahan-tsamihafa izao ?
Hatraiza ny fametrahantsika ny fahambonian’Andriamanitra eo amin’ ny fiainantsika ?
Catégories :	Mofon'aina	/ 0 Réponse / par AnjGab 17 septembre 2014